Ngomusa Yazisa: Ungadlali Ukhonkolo yakho Small Pump Truck! - China Qingdao CO-NELE Group
Ifoni: + 86-18306398869
Boom Ukhonkolo Pump Truck
Trailer Pump Ukhonkolo
Small lesidze Stone Pump
Ukhonkolo Mixer Pump
Ukhonkolo Ufaka Boom
Shotcrete sishaye Umshini
Ukhonkolo Batching Plant
Ngomusa Yazisa: Ungadlali Ukhonkolo yakho Small Pump Truck!
Omncane owakhiwe ngokhonkolo futha iloli ingenye esetshenziswa kakhulu izinto zokwakha embonini yezokwakha zobunjiniyela. It is kabanzi ahlukahlukene ubunjiniyela construction.However, ziyobe zisekhona ezinye amaphutha ekusebenzeni enqubeni bokusebenzisa kwethu kwansuku zonke, okungase kuholele ekubeni uthunyelelwe ukubambezeleka kwesikhathi ukwakhiwa bese ukusheshisa sokuphuka machine.So, ngenxa yalokhu inkinga, ake siqonde ukusetshenziswa indlela kwesokudla encane iloli ukhonkolo futha kanye kwesigaba elincane ngesikhathi esisodwa.
Small futha iloli isidingo ukumpompa isilinganiso esifanele amanzi amapayipi bushelelezi phambi uzotshala .Abanye opharetha angase abangasiqondi ukuthi amapayipi eside kufanele uchichime amanzi ngokwanele ukuba uwagcine smooth.In Eqinisweni, uma amanzi kakhulu akhishwa ngesikhathi kwakhiwa, ziyobe zisekhona ezinye ezilimele futhi avuzayo amasongo pipes.Investigate isizathu yayo, uma ishaya esigqulweni, esibonakalayo ukuthi nasekwenzeni amanzi touch ngaphansi emanzini isikhathi eside, amanzi esusa usimende slurry, ifomu nosimende ukuhlukaniswa, futha ukumelana inyuka, imbangela usimende slurry endaweni ye obonakele lesikhumba ring extrude ke yakha tube ivaliwe.
Hlola lokhu amaphuzu ngaphambi uzotshala:
A. imishini ngeke sibekwe kahle futhi ngokuqinile njengoba kudingeka;
B. Ingabe ugcwalise ithangi ngamanzi ecacile; Gcwalisa ithangi we bushelelezi amafutha futha nge isizinda lithium amafutha nowoyela bushelelezi
C. Igebe we izibuko ipuleti akufanele ibe nkulu kakhulu, kungenjalo kuzokwenza isimo esifanayo ngenxa ukuvuza yangaphakathi kwengaphakathi; ucabangela okusezingeni eliphezulu ukudonsa ingcindezi futhi zichichima main ukuphepha valve, main uhlelo ingcindezi kungase kushintshwe 28MPa.
Ukuze piping isicelo, imishini ngeke zihlolwe ngokugcwele:
1, iloli elincane futha ibanga elide ukudonsa ukumelana, zama bagawula bend, futhi kufanele bakhethe ngangokunokwenzeka kunokuba bend.Practice encane uye wafakazela ukuthi zonke goba ezingeziwe 90o × R1000 okulingana ngokungeza 5m ovundlile tube.Therefore, 4 12 90o kuphela × R1000 egoba zasetshenziswa ipayipi isakhiwo, kanye nabanye abangu-12 abafundi × amapayipi 3m iqonde 12 × 2m amapayipi ngqo, nge Ubude 310m.
2.Pay ukunakekela Ukuqinisa amapayipi kanye yasibamba amapayipi. Amabanga amade yepompo uhlangabezana tube sifinyelele ukwandisa futhi igalelo out.So khumbula ukuqinisa egcwele ukuze banciphise umthelela e kokuphenduka kanti ezinye ngqo.
3. Ngemva ukudonsa, iphayiphi kufanele zihlanzwe esifike ngesikhathi futhi iphayiphi kufanele zihlanzwe kabili kusukela maphakathi ukuqinisekisa ukuphepha security.What sika ngaphezulu, e-plug isipanji ibhola, kufanele kube phambi esikhwameni usimende, amabili isipanji amabhola, kanye yokuhlanza piston.
Siyabonga ngokubukela ~
Thumela isikhathi: Dec-25-2019
Siyakwamukela imeyli bob@conele.com ukuze uthole olunye ulwazi
Amadivayisi: TIEQISHAN ROAD 413, CHENGYANG ISIFUNDA, 266107, Qingdao, Shandong, ECHINA
Ifoni / Whatsapp: + 86-18306398869
Izici Zokuakha Zokhonkolo ...
Ungaxazulula kanjani ukuqedwa kokungenayo kwe ...
Ukuthengiswa kwangaphambi kukaKonecranes nangemva kokusawoti ...
Uyini umehluko phakathi kweloli lepampu ...
Indlela ukuxazulula umsindo ngokhonkolo futha t ...
UCelia: Sawubona, Siyakwamukela ukuvakashela iwebhusayithi yethu. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi
UCelia: Ufuna muphi umshini?
Cha ngiyabonga Chat Manje